China Ukhonkolo washout ifektri kanye nabaphakeli | I-BAOTE
Izikhwama zekhonkolo zokuwasha amaphampu zilungele zombili amaphampu omugqa namabhomu. Osayizi abajwayelekile bangama-175 * 104 * 37cm, 182 * 107 * 41cm, 110 * 110 * 49cm, 107 * 107 * 110cm, 51 * 49 * 51cm. (20 ”* 20” * 19 ”, 43” * 43 ”* 19”, 42 ”* 72” * 16 ”, 42” * 42 ”* 43”.) Njengamanje sikhiqiza ikakhulukazi uhlobo lwase-Australia, uhlobo lwaseMelika, iCanada thayipha isikhwama sempompo yokukhishwa kokhonkolo, isikhwama sokuxuba esilungile, isikhwama sokususa imfucumfucu ejwayelekile, isikhwama se-chute washout.
Iyini imfucumfucu yokuhlanza ukhonkolo? Cishe kuzo zonke izindawo zokwakha, abahlinzeki bakakhonkolo kudingeka ukuthi bageze phansi o-chutes babo noma amaphampu we-hopper ngaphambi kokushiya isiza. Le mfucumfucu yokuhlanza igcina isiqinile futhi iba yinkinga yezemvelo nokuphazamisa abasebenzi ukuyihlanza.
Ithimba le-BAOTE linga-OEM izinhlobo eziningi ze-Concrete Washout Bag yamakhasimende. Izikhwama Zokupompa Zekhonkolo inikeza isixazululo esisheshayo nesikahle sokuqukatha yonke imfucumfucu yokuhlanza ukhonkolo. Isikhwama sibekwa ngaphansi kwe-chute noma i-hopper kanti i-slurry itholakala ku-plastiki / polyethylene liner yangaphakathi esikhwameni.
Lapho ukhonkolo usethiwe, isikhwama singashenxiseka kalula ngokwakhiwa ngamaluphu ukuze kuthuthwe kuphephe futhi kube lula ukuya endaweni engekho esizeni. Zonke izikhwama zihlolwe ngokuphelele futhi zinemithwalo yokusebenza ephephile ebhalwe ngezansi.
Uma sekusethiwe, Isikhwama Sokugeza Sokhonkolonokuqukethwe kwayo kudala umkhiqizo wesibili osebenzisekayo ongawusebenzisa ezindongeni zepaki yemoto, izindonga ezisezingeni eliphansi noma izinhlanganisela eziqokiwe. Izikhwama ziphelele ukusetshenziswa ezinhlelweni ezifana neCivil Construction, Road Construction & Commercial Construction
Lezi zikhwama zizolethwa kusayithi nosonkontileka obhekene ne-cranage & nokubekwa nokususwa.
Kungani usebenza ne-BAOTE TEAM ukukhiqiza Izikhwama ze-Concrete Washout? I-BAOTE TEAM inesipiliyoni seminyaka engu-4 sokukhiqizwa kwesikhwama sokuhlanza ukhonkolo. Singahlinzeka ngekhwalithi ephezulu ngentengo yokuncintisana yamakhasimende. Siphinde singanikeza insizakalo enhle kakhulu emva kokuthengiswa kwamakhasimende. Siyakwamukela ukuxhumana kwenkampani yokukhipha imfucumfucu kithina, sizokunikeza imininingwane yezikhwama futhi sikunikeze okuhle!
Olandelayo: umshini wokuvala
Isikhwama Sokugeza Usimende
Isikhwama Sokugeza Chute
Izikhwama Zokufaka esikhundleni se-Construction Washout
Isikhwama se-Hopper Washout
Vula Isikhwama Sokuhlanza
Izinqola Zokuhamba, Isakhiwo Bolts, U Bolts, I-Hex Bolts, Kuqondile Ukhonkolo Pipe Machine, Ama-Lag Bolts,